Big City Small World (Series 1 Episode6- He'saPest!) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on June 12, 2012 at 14:43 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series 1 Episode6- He'sapest! (အတွဲ (၁)၊ အပိုင်း (၆)။ သူကတော့ ပြဿနာကောင်ပဲ!)
အသက် ၄ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ တူလေး Joe။ သူက ပြဿနာကောင်လား ဒါမှမဟုတ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်လေးလား?
Series 1 Episode6- He'saPest! ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Joe! ကျေးဇူးပြု၍ နင်လုပ်နေတာကို ရပ်လိုက်နိုင်မလား! ကျေးဇူးပြု၍ ဒီကိုလာထိုင်နေနိုင်မလား!
ဟယ်လို Olivia. အဲ့ဒါဘယ်သူလဲ?
ဒါ Joe လေ - ငါ့တူလေးပေါ့။
သြော်! ငါသဘောပေါက်ပြီ။ သူကချစ်စရာလေးနော်။ ငါက ကလေးတွေ ချစ်တတ်တယ်...
သူတို့ကို ကိုယ်က လိုက်မထိန်းရခင် အထိတော့ အကုန်ကောင်းနေတာပဲ...
နင်က သူ့ကို ထိန်းနေရတာလား?
ဟုတ်တယ်လေ။ ကံကောင်းလို့ ဒီနေ့တစ်ရက်တည်းပါ။ ငါ့အစ်မက ကလေးထိန်း ရှာမရလို့လေ။ ဒါပေမယ့် Joe က ငါ့ဆိုင်ကို ခဏခဏ လာတယ်လေ။ ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ သူက ဒီနေရာကို သဘောကျတယ်လေ!
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက pest လေ…
နင့်ကို စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စေတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ်ရင် တစ်စုံတစ်ခု...
မဖြစ်နိုင်တာ! ငါမယုံပါဘူး! သူက ဒီလောက် ချစ်ဖို့ကောင်းတာ! သူ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ?
၀ိုး...! ဖြည်းဖြည်းပေါ့ ကောင်လေးရ! သူက ဘယ်သူလဲ?
Fadi ရေ Joe ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဥိး။
သူက Olivia ရဲ့ တူလေးလေ။ ပြီးတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ပြဿနာကောင်လေး!
အို တစ်ကယ်လား! နင်က အဒေါ်ဖြစ်နေတာတောင် ငါမသိလိုက်ရပါလား Olivia ရဲ့ ။
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် Fadi ရေ။ နင်က ငါ့ကို အသက်ကြီးတယ်လို့ ခံစားရအောင်လုပ်လိုက်ပြီ။ နင် Harry နဲ့ စကားပြောပြီးပြီလား?
ဟင့်အင်း၊ မပြောရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါသူ့ကို ဒီနေ့ စကားပြောဖို့ ရှိတယ် ။ သူက ဒီကို ခဏနေ လာမယ်လို့ပြောသွားတယ်။
နားထောင်။ Harry ပြောတာက အမှန်မဟုတ်ဘူး...
သူက ငါ့ဆိုင်အတွက် ၀က်(ဘ)ဆိုဒ်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ငါ စိတ်ပျက်နေတယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ပေါ့။ သူမလုပ်နိုင်လဲ ငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူး! သူက ပိုက်ဆံ အများကြီး လိုချင်နေတာလေ။ ငါလုံးဝ တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီလေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက သူကိုယ်တိုင် ငါ့ကို ငြင်းလိုက်တယ်လို့ ထင်နေတာလေ… ငါသူ့ကို “ဟင့်အင်း”ဆိုပြီး ပြောပြီးတော့ စော်ကားသလို မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ ရလဒ်ပါပဲ။
ငါသဘောပေါက်ပြီ...ဒါဆို နောက်ဆုံးတော့ နင့်ကို ငါ ကယ်ထုတ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့?
Joe နင်အဲ့ဒါကို ကျေးဇူးပြုပြီးရပ်လိုက်နိုင်မလား? ဒီကို လာခဲ့စမ်း!
ဟေ့ သူငယ်ချင်းတို့! ဟေ့ Olivia၊ Magda ... ဒီကောင်လေးက ဘယ်သူလေးလဲ?
ငါ့တူလေး Joe ပါ။
ဟယ်လိုပါ Joe ရေ။
သူက အရမ်း..အင်း... ဘယ်လိုခေါ်ပါလိမ့်... တက်ကြွနေတယ်?
ငါကတော့ သူ့ကို “ပြဿနာ” လို့ပဲခေါ်တယ်!
ကဲ Fadi မင်း စီးပွားရေးအကြောင်း ပြောချင်လား?
အင်း။ နောက်ဆုံးတော့.. ငါ့ဦးလေးဆီက သဘောတူညီချက်ရပြီ။ ငါတို့ရှေ့ဆက်လို့ရပြီ။
အမြဲတမ်း “ဒါပေမယ့်” တွေရှိနေတာပဲ!
မင်း ငါတို့ကို တစ်ခုကူညီရမယ်။ ဈေးလျှော့ပေးရမယ် သူငယ်ချင်းရေ...
အင်း။ သူငယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် ငါ နှစ်ထောင့်လေးရာအထိလျှော့ပေးလိုက်မယ်။ ဒီထက်တော့ ပိုမလျှော့ပေးနိုင်ဘူး။
ငါတို့က တော့ နှစ်ထောင်ပဲပေးနိုင်မှာ။ အဲ့ဒါ ငါတို့အတွက် အမြင့်ဆုံး ကန့်သတ်ချက်ပဲ။ ဒီထက်ပိုများတဲ့ အသုံးစရိတ်လည်း မရှိတော့ဘူး။
စိတ်မကောင်းပါဘူးသူငယ်ချင်း။ နှစ်ထောင်ပဲ ဒါမှမဟုတ် ဘာမှ မလုပ်တော့ဘူး။
မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ ငါသွားရတော့မယ်... Johnny နဲ့ သွားတွေ့ရဦးမယ် - သူက ငါ့ကို တကယ့်အလုပ် ကမ်းလှမ်းထားတာ… အားလုံးပဲ တာ့တာ!
အို၊ မဟုတ်သေးပါဘူး။ သူ စိတ်ပျက်သွားတယ် ထင်လား?
ငါကတော့ စိတ်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားမသုံးသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်...
တကယ်တမ်းတော့ ငါတို့ ဒီထက် နည်းနည်း ပိုတိုးပေးနိုင်ပါသေးတယ်... ငါက ညှိနှိုင်းရ ခက်တဲ့သူ ဖြစ်အောင် လုပ်ကြည့်တာ။
နင်ခက်တာ လွန်သွားတယ် လို့ ငါထင်တယ်။
ဘယ်တော့မှ အလုပ်နဲ့ ခင်မင်မှုကို မရောသင့်ဘူးလေ။
ပြီးတော့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံပွဲကို ကော်ဖီဆိုင်မှာ မလုပ်သင့်ဘူး!
Fadi: Oh no. Whatamess! I’d better go. Hang on..where’s my...where are my....I can’t find my mobile! Or my keys! Has anyone seen them?
အို မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဘယ်လို အရှုတ်ထုတ်လဲ။ ငါသွားမှဖြစ်မယ်။ နေပါဦး… ဘယ်မှာ… ဘယ်မှာ… ငါ့ မိုဘိုင်းဖုန်းကို ရှာမတွေ့တော့ဘူး! ငါ့သော့တွေရောပဲ! တစ်ယောက်ယောက် တွေ့မိသေးလား?
ခုံအောက်တွေကို ကြည့်ကြည့်ဦး… ဒီနား တစ်နေရာရာမှာပဲရှိမှာပါ…
တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲ... ခဏနေပါဦး၊ ငါ့တူလေးက အရမ်းကို ငြိမ်နေတာ ငါးမိနစ်လောက်ရှိပြီ၊ ဘာတွေများလုပ်နေပါလိမ့်... Joe!!!
Permalink Reply by mhonpwintphyu on June 13, 2012 at 17:32
Many Thanks . I always download mp3 and lessons to learn.
Permalink Reply by mya than soe on June 18, 2012 at 8:00
Permalink Reply by minkhanttun on June 28, 2012 at 10:31
Permalink Reply by eaint moe sat on June 28, 2012 at 12:24
Permalink Reply by Thike Htun on June 29, 2012 at 10:51
Thank for learning this,thank you.
Permalink Reply by Phyo Maung Maung on June 29, 2012 at 18:35
It is really effective forelearning junior person.
Permalink Reply by Mi Mi Zun on July 5, 2012 at 14:38
Permalink Reply by ayeayethat on July 7, 2012 at 16:37
Permalink Reply by TINT TINT KHAING on July 11, 2012 at 23:12
ကျေးဇူးအမျာကြီးတင်ပါတယ်။ တူမလေးကိုလည်း share လိုက်ပါတယ်
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on December 31, 2012 at 1:49
Permalink Reply by Yi Yi Win on December 19, 2015 at 11:35